Ciidanka Xoogga dalka ayaa in ka badan 20-ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ku dilay duleedka deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha markii maleeshiyada ay isku dayeen iney weeraraan saldhig Ciidanku ku leeyihiin deegaankaasi.
Taliyaha Ciidamada Lugta Generaal Odawaa Yuusuf Raage ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in jab xooggan la gaarsiiyay maleeshiyada Al-Shabaab markii ay isku dayeen xalay iney weerar ku soo qaadaan saldhig ciidanka Xoogga dalka ku leeyihiin duleedka deegaanka Bariire,halkaasina looga dilay 20-ka tirsan maleeshiyadooda halka tiro intaasi ka badana looga dhaawacay.
Generaal Odawaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga dalka ay ka feejignaayeen dhagarta cadowga ummadda Soomaaliya,islamarkaana weerarkaasi ay ku halaagsameen,ciidanka qalabka sidana ay guulo ka gaareen.
Ciidamada Qalabka sida ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka waday gobolka Shabeellaha hoose howlgallo lagu baacsanayo argagaxisada, iyadoo maleeshiyada Al-shabaab ay soo wajahday cabsi xooggan oo uga imaaneysa Ciidamada geesiyaasha Qaranka Soomaaliyeed.
Dhawaan ayeey aheyd markii deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobolka laga xureeyay cadowga Ummadda Soomaaliyeed.